निवर्तमान (Nibartaman) ||: August 2016
संघीय स्वरुपमा स्थानीय तहको संरचना निर्धारणको कार्यादेश पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका/नगरपालिकासहितको स्थानीय संरचना प्रस्ताव गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा पुनःसंरचनाको बहस प्रखर रुपमा देखा पेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले आआफ्नै ढंगले आयोगले दिएको प्रतिवेदन माथि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा स्थानीय संरचना आवश्यक पर्नुको सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि संख्याकेन्द्रीत देखिन गएको छ । उनीहरुले यो संरचनालाई पनि पुरानै व्यवस्था अनुसारका गाविस र नगरपालिकाकै क्षेत्राधिकार जस्तो गरी टिप्पणी गरिरहेका छन् । दलहरुकोे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक आधार र त्यसको उद्देश्यको व्याख्या भन्दा पनि स्थानीय निकायको संख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने मै केन्द्रीत देखिन्छ ।
गत अगस्ट १२ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो । सोही दिन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै झण्डै दुई दर्जन युवा व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गर्यो । तर युवा दिवसका लागि सरकारले विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै केही युवाहरुलाई सम्मान गर्नेबाहेक आमयुवालाई लक्षित र आकर्षित गर्नेगरी कुनै प्रकारको कार्यक्रमको घोषणा भने गरेन । त्यसो त हरेकजसो दिवसलाई औपचारिक रुपमा मनाउने चलनै छ । अनि दिवसका दिन सरकारले कतिपय कार्यक्रमहरु घोषणा पनि गर्दछ तर ती सबै घोषणा केवल सस्तो लोकप्रियता र सुन्दर गफमै सीमित भएको दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् । त्यस्ता घोषणाले गम्भीर कार्यान्वयनको अवसर कहिल्यै पाउँदैनन् । ती केवल औपचारिक घोषणामै सीमित हुन्छन् र तिनले क्षणिक लोकप्रियताबाहेक केही पाउँदैनन् ।
विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका दिन नेपालमा पनि यस्तै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । अनि कार्यक्रममा भाषण गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बेरोजगारीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने भाषण गर्दछन् । युवाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका कुराहरु भाषणमा आउँछन् । अनि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दछ तर घोषणा गरिएअनुसार युवालक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कहीँकतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । केवल सरकारले बेरोजगार युवाहरुको सपनामाथि दलाली गर्ने काम गरिरहेको छ ।
-तस्बिर साभार ः रातोपाटी)
पटकपटक मिति तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ११औं महाधिवेशन अहिले कामाडौंमा चलिरहेको छ । महाधिवेशनको तामझाम हेर्दा गत फागुनमा सम्पन्न माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको झल्को दिएको छ । त्यसो त विद्यार्थी सङ्गठनको महाधिवेशनमा विद्यार्थी आन्दोलनका आगामी एजेन्डाहरुकै बारेमा बहस हुनुपर्ने हो । अर्थात्, अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ ? विद्यार्थीले कस्तो प्रकारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यार्थीहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? विद्यार्थी सङ्गठनले कसरी विद्यार्थीको हक हित र सुरक्षा गर्नसक्छन् ? मुलुकको शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावहारिक र अध्यावधिक गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका के हुन्छ ?
अन्ततः जुन व्यवस्थाको विरुद्ध माओवादीले बन्दुक उठाएको थियो, जुन व्यवस्था फर्ेनका लागि पटकपटक संर्घष्ाहरु भए, गरिए त्यही व्यवस्थाबाटै दोस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसो त माओवादी हतियारबन्द युद्धबाट शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि एक दसक भइसकेको छ । यर्सथ, झण्डै एक दसकको अवधि माओवादीले संसदीय राजनीतिको हिस्सेदार भएर बिताइसकेको सर्न्दर्भमा माओवादीको सत्तारोहणलाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु पनि वाञ्छित नहुनसक्छ । तथापि यसपटकको माओवादीको सत्तारोहणलाई जति नै सिद्धान्त र विचारको जलप लगाए पनि यो व्यवहारवादी देखिन्छ । हो, प्रचण्डको सत्तारोहण राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक कम र व्यवहारवादी बढी भएको छ ।
नत्र आफ्नै र्समर्थनमा बनेको सरकारलाई ढलाएर विपक्षी दलसँग सत्ताको लगन गाँठो कस्ने हतारो माओवादीलाई नहुनुपर्ने हो । यहाँनेर पर्ूव प्रधानमन्त्री केप ीओलीको अनुदार चरित्र अनि सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणमा देखिएको अनिच्छा र आफ्नै एकमनावादी सोँचले पक्कै पनि सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई सशंकित तुल्याएको हुनर्ुपर्छ । नत्र ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो, केपीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरणको विकल्प हुने थिएन ।
जे होस् अब सरकार परिवर्तन भइसकेको सर्न्दर्भमा ती सबै कुरा गौण भएका छन् । अनि आज केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय जुनसुकै दल र जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनोस् तर, यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर मात्र बनेको छैन किन्तु आम जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।
अन्ततः ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्तिझैं ८ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । ०६६ साल वैशाख २१ गते आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा केही जटिलता उत्पन्न हुँदा ‘नैतिकताको आधार’मा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन पुगेका प्रचण्डलाई त्यसयता सत्तामा पुग्न ८ वर्ष लाग्यो । आज आठ वर्षपछि पुनः सत्ताको भर्याङ उक्लिँदै गर्दा प्रचण्डका विषयमा आम चर्चा छ ।
जब प्रचण्डले ०६६ सालमा राजनीनामा गरे, उनको चौतर्फी आलोचना भयो । हुन त त्यो बेलाको परिस्थिति अलिक फरक पनि थियो । त्यो बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाहिरी कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई गरिएको बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिको थमौती नै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको उक्त कदमले नैतिक सङ्कटमा परेका प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुद्दा बनाएर सरकार छाडेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रैबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि ‘जनविद्रोह’ गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड थिए । अनि प्रधानसेनापति प्रकरणलाई त्यसैको रिहलसल मान्ने पनि धेरै थिए ।
‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ, भन्दा त्यति धेरै फरक पर्ने छैन सायद । अनि पर्खन सक्नुपर्छ, समय फर्कीफर्की आउँछ भनेझैं फेरि ८ वर्षपछि पुनः सत्तारोहणसँगै एकपटक ‘प्रचण्ड’ समय फर्किएको छ । प्रचण्ड नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अनि आफ्नै राजनीतिक जीवनकालमा दोस्रोपटक सिंहदरबार उक्लिएका छन् ।